WAR CUSUB: Goorma ayuu dhici doonaa shirka jaraa’id ee ay qaban doonaan milkiilayaasha cusub ee AC Milan? – Gool FM
WAR CUSUB: Goorma ayuu dhici doonaa shirka jaraa’id ee ay qaban doonaan milkiilayaasha cusub ee AC Milan?
Raage February 27, 2017
(Milano) 27 Feb 2018 – Warar haatan soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in shirka jaraa’id ee ay qaban doonaan milkiilayaasha cusub ee AC Milan uu dhici doono subaxnimada Sabtiga soo socda.
Sino-Europe Sports ayaa lagu wadaa inay Jimcaha la wareegaan kooxda Rossoneri, iyadoo haddii ay wax kastaahi sidooda u hirgalaan, uu Silvio Berlusconi kooxda iibin doono 30 sano kaddib, iyadoo Arbacada soo aaddan lagu wado inay is casilaan saamilayda haatan xilka haya.
Waxaa maanta qado ka dhacday Villa San Martino, uu Silvio Berlusconi ku casuumay madaxda Fininvest oo ay wehlinayaan Fedele Confalonieri iyo Adriano Galliani oo dhamaadkii qadada sheegay inay wax kasta sidoodii ku socdaan oo ay Jimcaha wareejinayaan kooxda marka ay lacagtu soo gasho khasnadda Fininvest.
Premium Sport ayaa werinaya in Yonghong Li uu noqon doono madaxwaynaha cusub ee AC Milan halka Li Han uu noqon doono isku xiraha China iyo maamulka AC Milan, door la mid ah midka uu Inter Milan ka hayo Steven Zhang., ama madaxwayne xigeen awood fulineed leh haddii uu Berlusconi qaato jagada madaxwayne sharafeed aan awood fulineed lahayn.
Guddiga fulinta ayaa lagu wadaa inay ka koobnaan doonaan 6 xubnood, 3 Talyaani ah – oo ay ku jiri doonaan Marco Fassone iyo Max Mirabelli – iyo 3 Chinese ah.
Sabtida ayaa lagu wadaa in uu dhoco shirkii jaraa’id ee ugu horreeyay ee ay qaban doonaan maamulka cusub ee AC Milan, saacaddu marka ay Tahay 11:30 xilliga maxalliga ah, waxaana shrikaa ka hadli doona Fassone iyo Li oo jeex jeexi doona qorshayaasha Milan-ta cusub.
GOOGOOSKA: Leicester vs Liverpool 3-1 (Leicester oo soo laabashadeeda Liverpool ku luqluqatay)
Leicester City oo ka reysatay Ranieri saddex goolna ku dhufatay Liverpool (Daawo goolashii ciyaarta)